Madaxweynaha D.F.K.S oo Ka Hadley Qaraxa Muqdisho Maanta Ka Dhacay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha D.F.K.S oo Ka Hadley Qaraxa Muqdisho Maanta Ka Dhacay
Waxaa goordhaweyd shirjaraa’id ku qabtey aqalka madaxtooyada Muqdisho Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed, Shirka saxaafadda loogu talo galay waxaa ku weheliyey Shariifka Raysalwasare Cumar Cabdirashiid oo fadhiyey dhinaciisa.
Shiikh Shariif ayaa ugu horeyn tacsi u direy dhamaan shacabka Soomaaliyeed, waxana uu ka tacsiyeey dadkii ku dhintey qaraxa maanta lagula beegsadey Hotel Shaamow qaarkamid ah wasiirada Dawladda, Dhakhatiir, Weriyaal iyo Ardey.
“Waxaan aad uga xunahay dilkii maanta loo geystey wasiirka waxbarashada, wasiirkii tacliinta sare iyo wasiirkii caafimaadka” ayuu yiri Shiikh Shariif isaga oo aan soo qaadin magacyadooda.
Madaxweynaha ayaa ku tilmaamey qaraxu in uu ahaa fikrad shisheeye, waana musiibo ku habsatey umadda Soomaaliyeed waxaana masuuliyadeeda qaadaya kuwa fuliya afkaarta shisheeye ee ka soo horjeeda Dawladda ayuu yiri Shariifku.
Madaxweynaha ayaa sheegay in aysan arintaani hakin doonin dedaalkii ay ugu jireen in ay dalka Soomaaliya nabad ku soo dabaalaan, waan xoog weynahay waana ka guuleysanaynaa kuwa nabada diidan ayuu yiri.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqey beesha caalamku in ay garab istaagaan umadda Soomaaliyeed oo wax kala qabtaan dhibta ay ku hayaan kuwa nabadda diidan, waa sida hadalka uu u dhigaye.
Shirka jaraa’id kadib ayaa saraakiil ku sugneyd goobta ay tuseen suxufiyiinta ninka fuliyey is miidaaminta meydkiisa waxa uu ahaa mid qaarka danbe aad uga googay laakiin wejigiisa la garan karo waxa uu isticmaaley suunka is qarxinta ee dhexda lagu xirto.
Qaraxa maanta ayaa ahaa kii sadexaad ee lala beegsado xubno sar sare oo tirsan dawladda uu madaxweynaha ka yahay Shiikh Shariif muddo lix bilood gudaheed ah, waxaa ku dhintey inta la ogyahay dad gaaraya 20 qof kuwaas oo isugu jira wasiiro ay ka mid yihiin:
1. Wasiirka Caafimaadka Qamar Adam Cali
2. Wasiirka Taclinta Sare Prof. Ibrahim Xassan Caddow
3. Maxamed Cabdullaahi Waayeel Wasiirka Waxbarashada
Waxaa sidoo kale ku dhintey suxufiyiin, ardey, dhakhaatiir iyo waalidiintii ardeyda. Qaraxa maanta ka dhacay Hotel Shaamow waxaa ku dhaawacmey dad gaaraya 40.